Mogadishu Journal » 2021 » March » 24
Turkey 4-2 Netherlands: Yilmaz ayaa quusiyay Dutch kulan xiiso badan oo furitaanka isreebreebka Koobka Adduunka ah
Netherlands ayaa si liidata ku bilaabatay isreebreebka Koobka Adduunka iyadoo Burak Yilmaz uu ku dhiirrigeliyay Turkey guul weyn. Burak Yilmaz ayaa dib ugu soo laabtay sanadihii u dambeeyay si uu u dhaliyo seddexleey cajiib ah iyadoo Turkiga uu iska caabiyay dagaal isla markaana...
Hey’adda caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbatay in Cabdirashiid Janan ay kula xisaabtanto dembiyada dagaal ee horay loogu eedeeyeylana horkeeno Caddaalada Amnesty oo soo saartay qoraal ayaa waxay sheegtay baahida loo...
Burcad dhac ka geysan jirtay xaafado ka tirsan Muqdisho oo caawa la qabtay (Sawirro)
Muqdisho:-Booliiska Degmada Yaaqshid ee Gobalka Banaadir ayaa caawa gacanta kusoo dhigay dabley Hubeysneyd oo dadka degan degmadaasi Dhac u geysan jiray iyagoo dadka ka furanaya Taleefoonada gacanta. Soo qabashada burcadan ayaa ka dambeysay ka dib howlgal ay sameeyeen ciidanka...
(Sawirro) Sidee C/rashiid Janan loogu soo dhoweeyey degmada Belad-xaawo?
Waxaa maanta Beled Xaawo lagu soo dhaweeyay wasiirkii amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan oo la sheegay inuu heshiis la galay Dawladda Federaalka ee Soomaaliya. Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa ku qaabilay wasiir dowlaha Wasaaradda gadiidka Cabdiraxmaan Dheere iyo wasiir ku...
Wararkii ugu Dambeeyay kulan dhax maray Fahad Yaasiin iyo Cabdirashiid Janan
Wararka ka imaanaya degmada Baled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa ku waramaya in halkaasi ay gaareen taliyaha ciidanka Nabad sugida iyo sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin iyo masuuliyiin kale oo katirsan dowlada Federaalka. Waxaa sidoo kale degmada Balad Xaawo soo gaaray Wasiirkii hore...
Kenya oo amar ku bixisay in 14-maalmood gudahood lagu xiro xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma
Dowlada Kenya ayaa ku amartay hay’ada qaxootiga aduunka ee UNHCR in ay la timaado 14-cisho gudahood qorshihii lagu xiri lahaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma ay ku jiraan qaxooti badan oo Aoomaaliyeed. Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya CS Fred Matiang’i ayaa faray ...